Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : ဂျူနီယာဝင်း – ဦးခင်မောင်လတ် ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် နှစ်တစ်ရာပြည့် အမှတ်တရ သုို့
ဂျူနီယာဝင်း – ဦးခင်မောင်လတ် ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် နှစ်တစ်ရာပြည့် အမှတ်တရ သုို့
မေမေကြီးဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ၏၂၀၁၄ မေလ ၁ ရက်နေ့ ၉၉ ပြည့်မွေးနေ့တုန်းက သြော်…. နောက်နှစ် ၂၀၁၅ ဆုိုရင် မေမေကြီး နှစ်တစ်ရာပြည့်တော့မည်… ဘဘကြီးဦးခင်မောင်လတ်လဲ ၂၀၁၅ သြဂုတ်လ ဆုိုနှစ်တစ်ရာပြည့်တော့မှာပဲ…. ဘာများ အမှတ်တရ လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ…. စိတ်ကူးပေါ်လာရာကနေ ‘A Memory of my grandparents’ အမည်တပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လုိုစာတစ်အုပ် ရေးဖုို့စိတ်ကူးရလာခဲ့ပါသည်။ သည်တော့ သည်စိတ်ကူးကုို မိသားစုနဲ့ တုိုင်ပင်လုိုက်တော့ သဘောတူကြသည်။ (သည်နေရာမှာ ဖြတ်ပြောရရင် ကုိုယ့်ဘာသာကိုယ့်စာရေးတာ မိသားစုနဲ့ တုိုင်ပင်စရာလုိုသလား… တခြား တော့မဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်အဘုိုးအဘွားအကြောင်း နှစ်တရာ အမှတ်တရ အင်္ဂလိပ်လုို ရေးတာလဲ ဖြစ်လုို့ သည်နေရာ မှာတော့လုိုပါသည်။ နောက်ပုိုင်းတွင် ဘာကြောင့် လုိုသလဲဆုိုတာ စာဖတ်သူများ သိလာရမည် ဖြစ်ပါသည်။) သဘောတူ – ဆုိုတဲ့ စကားလုံးက အလွယ်တကူ အဖြေထွက်လာတာ မှန်သောလည်း အကောင်အထည် ဖော်ရတာ မလွယ်ပါ။ တကယ်စလုပ်တော့ တဖြေးဖြေး သိလာရသည်။
ဘဘကြီး မေမေကြီး တုို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံဟောင်းတွေ – စာအုပ်ဘီဒုိုဟောင်းတွေ – စာရွက်စာတမ်း အဟောင်းအနွမ်း အတုိုအစတွေ – ဖွဖုို့ – ရှာဖုို့ – မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ကောက်ဖုို့ ဆိုတာ ဘယ်သူ့ တာဝန်ဖြစ်သွားသလဲ – ကျွန်မ၏ မိခင် တက္ကသုိုလ်ရွှေရီဝင်း ထံကုို ဖြစ်ပါသည်။ သူက စကတည်းက ဓါတ်ပုံဟောင်းများ၊ ဘဘကြီးမေမေကြီးတုို့အကြောင်း အထုပတ္တိများ ကုို စုဆောင်းကာ ရေးမှတ်သိမ်းဆည်းတတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မစာစတင်ရေးသားနေချိန်က စလုို့တလျောက်လုံး လုိုရင်လုိုသလုို တောင်းလုိုက်တုိုင်း အချက်အလက်မှန်သမျှ မေမေခင်ဗျာ ပြန်ရှာပေးရ၊ ထုတ်ရ၊ တော်တော်အလုပ်များရပါသည်။
ကျွန်မထုို ၂၀၁၄ မေလကနေ စိတ်ကူးရလာကတည်းက ခေါင်းစဉ်များ တပ်ကာ ခှုနှစ်များအလုိုက် ခွဲပြီး အကြမ်းစရေးချိန်ကစလုို့ ညဘက်တွေတော်တော်ကြီး မုိုးချူပ်မှ အိပ်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှလည်း စိတ်ကူးထဲမှာ ဘယ်လုိုရေးရ၊ ချွတ်ရ၊ ဘယ်လုို ခေါင်းစဉ်တပ် ဖွဲ့နွဲ့ရ – ဒါကိုပဲ စဉ်းစားနေမိသည်။ ဓါတ်ပုံများကုို ခုနှစ်အလုိုက် ပြန်စီကာ အကြောင်းအရာများ ကုိုမမေ့အောင် မှတ်ချက်များနှင့် သိမ်းဆည်းထားသောလည်း တကယ်တန်းချရေး ဘာရေးနဲ့ ကျန်သွားတာများက ပြန်စစ်တုိုင်း တွေ့တွေ့နေတာကြောင့် နောက်ပြန်ပြန်သွား နေရတာ တွေကများနေသည်။ ဒါကြောင့်မုို့လုို့လဲ “အရှေ့ကုို လျောက်ပါလုို့ အနောက်ကုိုတဲ့ မျော်လုိုက်ရင်“ တေးသီချင်းညီးနေရ တာနောက်ဆုံး ပြီးပြီဟု လွှတ်လုိုက်မိတဲ့အချိန်တုိုင်အောင်ပါပဲ။ ရေးနေတဲ့ကာလတစ်လျောက်မှာ ဖေဖေ့ကုိုလည်း ပြန်ဖတ်ခုိုင်းကာ အဲဒစ်လုပ်ခုိုင်းနေရပါသည်။
အရင်ကဖတ်ခဲ့ဘူးသော အင်္ဂလ်ိပ်စာအုပ်များ ချားစ်းဒစ်ကန်၊ ဘရွှန်တေ၊ ဆာအာသာကွန်နင်ဒွိင်း၊ စတဲ့ ဘုိုင်အုိုဂရပ်ဖီစာအုပ်ကြီးများကို ပြန်ဖတ်ရင် ဘုိုင်အုိုဂရပ်ဖီ စတုိုင်များကုို စိတ်သွင်းမိသည်။ သူတုို့ ရေးသားနည်းများ၊ ဖွဲ့ဆုိုပုံများကုို အတုယူပြီး ခံစားမိသည်။ တဖန် ဘုိုင်အုိုဂရပ်ဖီ ပုံစံဟာဖြင့် ညီးငွေ့စရာပဲ ဟုခံစားမိကာ စတုိုင်ပြန်ပြောင်းရေး ဖုို့စိတ်ကူး ရလာသည်။ ထုို့ကြောင့် အမှတ်တရ စွဲလန်းခဲ့ရသော ဂျူးမားတုို့ ဘရန်စတော့ကာ တုို့ သောမတ်စ်ဟာဒီ စတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားအတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ စာပေများကုို အရသာပြန်ယူကာ ဖတ်ရင်း သဘောကျမိသည်။ သည်လုိုပုံစံကုို ပုိုသဘောကျတယ် —— အဲဒါပုိုကောင်းတယ်…… စသဖြင့် စိတ်ကူးနေမိပြန်သည်။
ကျွန်မရေးသားနေစဉ်ကာလမှာ အကုိုဖြစ်သူ ကာတွန်းမောင်ရစ်ကုို လုိုအပ်သောပုံများ၊ ဓါတ်ပုံတချိူ့ ရှာခုိုင်း ဆွဲခိုင်းနေရသည်။ တခါတရံ မေမေက လာပြသော ဓါတ်ပုံဟောင်းများ အချက်အလက်တချိူ့ကုို မလုို မသုံးဟု ဆုိုကာ ပြန်သိမ်းခုိုင်းတာမျိူး ကျွန်မက လုပ်မိသည်။ တော်တော်လေးကြာမှ အနောက်ကုို ပြန်လှန်လှော် ရေးနေမိရင်း … ဟုိုတရက်က မေမေပြောတာ မဆုိုးဘူးပဲ… ဟုိုဓါတ်ပုံဟောင်းက ပြန်သုံးသင့်တယ် … စသည်ဖြင့် စိတ်ကူးပေါ်လာကာ မေမေ့ကုို ပြန်တောင်းတော့ မေမေလဲ ဒုက္ခရောက်ရသည်. သူလဲ ဘယ်နားပြန်သိမ်းမိသည်မသိ ဖြစ်ရသည်။ ပေးတုန်းက ယူမထားဖူးဟု တဖြစ်တောက်တောက်ပြောကာ ပြန်ရှာ ပြန်လှန် လုပ်ရပါသည်။ တအိမ်လုံး ဘယ်သူမှ မနားရပါ။ ရေးတဲ့အလုပ်ကုို ဒုိုင်ခံလုပ်နေသော ကျွန်မကုိုသူတုို့အားလုံးက ညှာကြပါသည်။ ဒါကုို အခွင့်အရေးယူကာ ကျွန်မစိတ်ကူးများ လွင့်ပြန့်နေသည့်အတုိုင်း စိတ်ကူးများ သွားလေရာ အဆင်သင့် ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်း နဘေးကသူများကုို တော်တော်ကြီး နှိတ်စက်နေမိပါသည်။ နောက်ပုိုင်းတွင် သူတုို့ ကျွန်မစာရေးနေသော အနား မလာရဲတော့ပါ။ တခုခု လှမ်းခုိုင်း လှမ်းရှာခုိုင်းမှာ ကြောက်နေကြပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်…. မိသားစု ပံ့ပုိုးမူမပါပဲနဲ့ သည်စာအုပ် မဖြစ်နုိုင်ပါ။
ဒီဇင်ဘာလ အပြီးဟု မှန်ုးကာရေးခဲ့သောလည်း စိတ်တုိုင်းမကျတကျဖြင့် ပီးသွားရသည်။ ဒါကုို အကြမ်း ၂စုံ ၃စုံထုတ်ကာ တရွက်ချင်းအသေးစိတ် ကြည့်ရင်းက ကျွန်မက ကိုယ့်ကုိုယ်ကို်ယ်စာဖတ်သူ နေရာကနေခံစားမိသည်။ တချိူ့နေရာများ အီနေတာ၊ အဆင်မပြေသေးတာများကုို အပေါ်စီးကကြည့်တော့ မြင်ရသလုို တွေ့နေရသေးသည်။ ဒါတွေကုို ပြန်ပြင်ပြန်ရေး….. ဖေဖေ့ကိုလည်း ပြန်ဖတ်ခုိုင်းကာ အကူအညီတောင်းရသည်။ ဒါနဲ့Index ထည့်ဖုို့ စိတ်ကူးရကာ အင်ဒက်စ်ကုို နံမယ်စာရင်းလုပ်ကာ တအိမ်သားလုံးအကူအညီဖြင့် ၀ုိုင်းလုပ်ကြပါသည်။ ဒါနဲ့ အုိုကေဟု ဆုိုကာ Kindle Ebook ထွက်သွားသည်။ အခုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ ထဲရောက်လာပြီ။ ဒါကုိုထုတ်ဖုို့ ရန်အောင်စာပေသုို့ပို့။ ပုံနှိပ်တိုက်လက်ထဲသုို့ရောက်တာနဲ့ အမြန်အပြီးအစီးဆုိုရင် ၂ပတ်အတွင်း စာအုပ်ဖြစ်ပြီ ဟု ဆုိုပါသည်။ ဒါဆုို ၀မ်းသာစရာပေါ့။ မတ်လအတွင်းမှာ စာအုပ်မြင်ရတော့မည်။
စာမူကို ကျွန်မကိုယ်တုိုင် ဝေါ့ဒ်နဲ့ ရုိုက်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံလေးအောက်ဒီဇုိုင်းကုို ကုိုယ်တိုင်လုပ်ပါသည်။ စရုိုက်တုန်းက အဆင်ပြေမယ် ဟုဆုိုိထားသော အတုိုင်းအတာက တကယ်တန်းရုိုက်ဖုို့လုပ် တော့အရှည်က ၁လက်မခွဲ ပုိုနေသည် ဆုိုသည်။ ဒါကုို ပြန်ပြင်ဖုို့က ကျွန်မဆီ ပြန်ရောက်လာသည်။ မူလက ၁၇၇ မျက်နှာက စာရွက်အရှည်ကို တုိုလုိုက်တော့ ၂၄၀ ဖြစ်သွားသည်။ ပုံတွေရော စာတွေရော စာမျက်နှာ နံပါတ်များကအစ ပြန်ပြောင်းကုန်တော့သည်။ ပုံတချိူ့ကုို ပြန်လျော့်ရပါသည်။ စာများက ပြန်ကာ စီရပါသည်။ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ ၁၉ ၉ မျက်နှာ မှာ ရပ်။ ဒါထက်လျော့လုို့ တော့မရပါ။ အင်ဒက်စ်က စာမျက်နှာနံပါတ်များ လွဲသွားခဲ့ပြီ။ ဒါကုို သာအစကပြန်လုပ်ကြရင် မတ်လကုန်တောင်မပြီးနုိုင်။ မတတ်နိုင်…. ဒါကိုတော့ လွှတ်လုိုက်ရပီ။
စာအုပ်အတွင်းက ဒီဇုိုင်းပုံစံကုို ကျွန်မဖတ်နေသော ဆာအာသာကွန်နင်ဒွိုင်း အတုပတ္တိဒီဇုိုင်းပုံစံ (ဘရုစ် ၀က်စ်စာ ရေးသားပြီး ဆူရိုစ့်၏ ဒီဇုိုင်းပုံစံ)၊ သောမတ်ဟာဒီ အထုပတ္တိဒီဇုိုင်းပုံစံ (ရုိုက်တာ အင် ဗြိတိန်စီးရီးမှ) ကုို နောက်ဆုံး ဆကာတင် ရွေးထားပါသည်။ အတွင်းကာဗာပုံများကုို အဲသည်လုိုပုံစံမျိူးဝင်အောင်လုပ်ပါမည်။ ဒါကိုကျွန်မကုိုယ်တုိုင် စိတ်တုိုင်းကျ လုပ်ထားသည်။ အရောင်ကအစပေါ့။ အပိုင်းများခွဲထားတာကုိုလည်း ကျွန်မစိတ်ကူးအတုိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါသည်။ ထုိုစာအုပ်များ အတွင်းကေ၇းသားထားသော စတုိုင်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၏ စာသား ရေးသားပုံများကုို ကျွန်မအတုခုိုး ထားပါသည်။ ကိုယ့်အဘုိုးအဘွားအကြောင်းများ စာအုပ်မို့ တစ်မျက်နှာချင်းကုို အသေးစိတ် ကြည့်ကာ စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားပါသည်။ စာအုပ်ကုို မြင်လုိုက်တာနဲ့ ဘဘကြီးတုို့ မေမေကြီးတို့ကုို သတိရမိအောင်ပေါ့။ ပုံနှိတ်မှတ်တမ်း ကုိုအင်္ဂလိပ် စာအုပ်များဆီက ပုံစံမျူိးကုို တော်တော်များများ လေ့လာထားပါသည်။ အဖုံးကုို ကုိုမောင်ရစ်က တာဝန်ယူပေးထားတာကြောင့် အဖုံးကုို သူ့ပဲအပ်ပါမည်။ ကျွန်မစိတ်ကူးရှိတုိုင်းသာ အကောင်အထည်ဖော်မည်ဆုိုပါရင် စာအုပ်တောင် ထွက်ဖုို့ ကြန့်ကြာဦးမည်ထင်ပါသည်။ ရန်အောင်စာပေက ကျွန်မ မောင်လေး ကိုပြည့်ကျော်က စာအုပ်ကိစ္စများ စိတ်ရှည်လက်ရှည် အကူအညီပေးတာကြောင့် သူ့လဲ အားမနာတမ်းခုိုင်းနေမိသည်။
ထုိုအတောအတွင်းမှာ “ငါများရူးသွားပီလား“ ဟု စိတ်ထဲဖြစ်မိသည်။ အလုပ်က မပီးမှာကုို စုိုးရိမ်စိတ်ကများနေပြီး ရက်စွဲတွေမေ့လျော့ကာ ချိမ်းထားတာတွေ ကအစ မေ့ကုန်ပြီ။ ရေးနေသော တချိူ့စာမူများကုို ရေးပီးပြီလား ပို့ပြီးပလားကအစ မသိတော့ပါ။ လုပ်ပြီးသားအလုပ်များကုို ပင် မလုပ်ရသေးဟု စုိုးရိမ်သောက ဖြစ်တာတွေ များလာသည်။ ထုို့ပြင် စာစရေးကတည်းက ဖြစ်ပေါ်နေသော ကွန်ပြူတာ၊ တက်ဘလက်နှင့် မက်မုိုရီစတစ်များအပေါ် စိတ်မချမူ၊ မယုံကြည်မူများ ယခုကာလအတွင်း ပိုများလာတာကြောင့် ကျွန်မကုိုယ်ကျွန်မ ရူးများနေပြီလားဟု သံသယ ဖြစ်လာရပါသည်။ မေမေကြီး ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ပြောတာ သတိရသည် … ဘာတဲ့ … ကုိုယ့်ကုိုယ်ကိုယ် ရူးနေပြီလားဟု စိတ်ဖြစ်နေသ၍ မရူးသေးပါ တဲ့။ ဒါဆုို တော့မစုိုးရိမ်ရပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပို်င်းနှင့် မတ်လဆန်းလောက်မှာ စာမူအပြီးအပ်ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မစာအုပ်သည် မှန်းထားသည့်အတုိုင်း မတ်လကုန် သို့မဟုတ် အနောက်ကျဆုံး ဧပြီလဆန်းလောက်ဆို ထွက်နို်င်ပါသည်။
မတ်လဆန်းလောက်မှာ The Irrawaddy Magazine ကနေ ကျွန်မ၏ အင်္ဂလိပ်လုို ဘလော့ဖတ်ရာကနေ သည်စာအုပ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားပြီး ကျွန်မထံ ဆက်သွယ်လာပါသည်။ သူတုို့က သည်စာအုပ် မထွက်ခင် သည်စာအုပ်အကြောင်း ပရီဗျူး (Preview) ရေးမည် ဟု ဆုိုပါသည်။ ကျွန်မသည် ထုိုသုို့ မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုက စိတ်ဝင်တစားရှိလာခြင်းအပေါ် အလွန်စိတ်လှူပ်ရှားမိပါသည်။ ကျွန်မစိတ်ထဲတော့ သည်စာအုပ် စိတ်ဝင်စားသူ တစ်ယောက်ပေါ်လာတုိုင်း ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား နှင့်မယုံနုိုင် ဖြစ်ရပါသည်။ ကျွန်မနှင့်ဂရုတစုိုက် လာတွေ့သော The Irrawaddy Magazine သုို့ ကျွန်မ၏ Introduction အချိူ့နှင့် ဘဘကြီးမေမေကြီးတို့ အကြောင်းများကုို အတုိုချူပ်ပြန်စီစစ်ကာ ပေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထုို့ပြင် အဖုံးနမူနာကုိုလည်း တောင်းသဖြင့် ပေးဖြစ်ပါသည်။ သူတုို့က ယခုလုို ကျွန်မအား တလေးတစားလာရောက် မေးမြန်းတာကုို ကြုံရသည့်အဖြစ်အတွက် အထင်ကြီးစရာ ဖြစ်နေပါသည်။ စာအုပ်ကုို သူတုို့က သူတုို့တုိုက်က မိတ်ဆွေများ ကပါစိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြကြောင်းပြောတော့ သိပ်အံ့သြမိပါသည်။ ဘဘကြီးမေမေကြီးတုို့ အကြောင်းကို စာဖတ်သူများဘက်က စိတ၀င်တစားရှိခြင်းအတွက် ကျွန်မတုို့အားလုံး ပျော်ရွှင်ရပါသည်။
‘A Memory of My Grandpaents’ စာအုပ်သည် ယခုသည်စာရေးနေသည့် အချိန် မတ်လ တတိယအပတ်အရောက်မှာတော့ ဖလင်ဆွဲသည့် အဆင့်ကုို ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ရေးနေသည့်ကာလတစ်လျောက်လုံး ဘဘကြီး မေမေကြီးတုို့ကုို ပုိုပြီးသတိရ၊ ပိုပြီးလွမ်းကာ၊ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာတွေကုို ဘယ်လုိုစာဖွဲ့ရပါ့။ မေမေကြီး အနော်ရထာ စာအုပ်ရေးစဉ်တုန်းက သထုံမြို့က သစ်တပင်အောက်မှာ မေမေကြီးက တရားထုိုင်ရင်းနဲ့ ရှေးပုဂံသူရဲကောင်းများက ပေါ်လာပြီး ကူညီလေမလားဟု သောမျော်လင့်ချက်နဲ့ တရားအားထုတ်ခဲ့သတဲ့။ ကျွန်မကတော့ ဘဘကြီးမေမေကြီး တုို့ရဲ့အငွေ့အသက်များ ရှိနေတဲ့… ဟောသည် ပြည်ရိပ်သာ ခြံကလေးမှာ … မျက်စိကုို (ခဏလောက်တော့) မှိတ်ကာ ဘဘကြီးမေမေကြီးတုို့ကုို စိတ်ကူးဖြင့် မြင်ယောင်ကြည့်ပါသည်……….။
အခုတော့…. ဟောသည်….သူတုို့ နှစ်ဦးရဲ့ အမှတ်တရ စာအုပ်…. ကျွန်မ…. သူတုို့ရဲ့ခပ်တုံးတုံး မြေးတစ်ကောင်ရဲ့… လက်ချက်နဲ့…. သူတုို့ အကြောင်းတွေကုို…… ဘာကုို ဘယ်လုို လျိူ့ဝှက်ထားရမှန်းမသိ….. ဘာကုို ဘယ်လုို ထုတ်ဖော်ရေးရမှန်းမသိ…. သူရေးချင်သလုို…. သူရေးတတ်သလုို…… သူစိတ်ကူးထဲရှိသလုို….. သူ့စိတ်ကုို လွှတ်ပြီး…….. အိတ်သွန်ဖာမှောက်ရေးခဲ့ … ချွတ်ခဲ့….. တဲ့…. ဟောဒီ နှစ်တစ်ရာပြည့် စာအုပ်ကုို …… ကောင်းကင်ဘုံကနေ……. တွေ့မြင်ခဲ့ကြကာ…….. ၀မ်းသာနေမလား…….. ပြုံးနေကြမလား……… ကျေနပ်နေကြပါရဲ့လား…………။
(ပုံမှာ Irrawaddy Magazine – April issue တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသော စာအုပ် Preview ဖြစ်ပါသည်။ ရေးသူမှာ Nora Swe ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို ကျွန်မစာအုပ်ကုို သူတို့ဘက်က စတင် စိတ်ဝင်တစားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုကာ ကြော်ငြာပေးသော Irrawaddy magazine နှင့်တကွ စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လာရောက်မေးမြန်းခဲ့သူ Nora ကုိုလည်း ကျေးဇူးတင်နေမိပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်ရဲ့ မေလရဲ့ ရက်တစ်ရက်မှာတော့ သည်စာအုပ်လေးကုို ဘဘကြီးမေမေကြီးတုို့၏ နှစ်တရာပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် စာပေမိတ်ဆွေများ၊ သူတုို့ကုို ချစ်ခင်လေးစားသူများ လက်ထဲကုို မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးဖြစ်ဖုို့ ကျွန်မတုို့ မိသားစု ၏ အင်အားဖြင့် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေကြပါသည်။ အခုကတည်းက ရင်ခုန်နေမိကြပါသည်။)
Posted by Junior Win at 10:52 PM
Labels: Articles, Memories